Rita, Writing for My Sake!: ကျိန်စာ (၂) - မောင်သစ်ဆင်း
Posted by Rita at 4/02/2010 09:17:00 PM
It had been read long time ago.
But still remember.
I've just read it again.
We passed the time the way we wish.
Some ambition of young age were passed away.
Some are deviated.
Thank for sharing and rendering.
(၁) နဲ့ (၂) တစ်ခါတည်း ဖတ်သွားတယ်။ ကျိန်စာလည်း ၀တ္ထုတိုကောင်းတစ်ပုဒ်ပဲ။ ဖတ်ရင်းနဲ့ မျက်စိထဲမှာ ပြကွက်တွေလို တစ်ကွက်ပြီးတစ်ကွက် မြင်ယောင်သွားတယ်။ highlight လုပ်ထားပေးတဲ့ စကားပြောတွေလည်း သိပ်ကောင်းတယ်။ ကျေးဇူး ရီတာ။း)
ကောင်းပါ့ဗျာ။ ဆရာ မောင်သစ်ဆင်း စာတွေကတော့ အတွေး တစ်ခုခုတော့ ပါတာပဲ။ ဆရာ ဖေမြင့် ၀တ္ထု တိုတစ်ပုဒ်နဲ့ တော်တော်ဆင်တယ်။ ကျေးဇူးပဲဗျို့။ နောက်လဲ ဆက်မျှဝေပါဦး။
၁ နဲ့ ၂ တခါတည်း ဖတ်သွားတယ် ညီမ ရီတာ...ဒီတပုဒ်လည်း အရသာရှိတာပဲ...ပြန်တင် ဝေမျှတာ ကျေးဇူးညီမရေ...
၀တ္ထုတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် “တကယ်တမ်း အဆုံးရှုံး အစွန့်လွှတ် မခံနိုင်ဘဲနဲ့ ဘာကိုမှ မစွန့်စားပါလေနဲ့” ဆိုတဲ့ သြ၀ါဒနဲ့ ပေးချင်တဲ့ message ကိုတော့သဘောမတွေ့ပါ။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်ဖြစ်စေ, အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်စေဟာ Risk မယူပဲ တိုးတက်တာ မရှိနိုင်ပါဖူး။ Risk ကို ကြောက်ရွံ့ဖို့ထက် Risk ကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ကို သင်ကြားရမှာပါ။
ဒီတော့ “တစတစ စွန့်ဝံ့မှလျှင် ဘ၀နောက်နှောင်း ဆက်တိုင်းကောင်း၏” ဆိုတဲ့ ဆရာကြီး ဦးရွှေအောင်ရဲ့ သြ၀ါဒကိုပဲ ပိုပြီးနှစ်ခြိုက်နေမိပါတယ်။
မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ လင်ကောင်းသားကောင်း ရည်မှန်းချက်ကြီးရဲ့ ကျဆုံးခန်း
I agree with sonata-cantata comment.
ကျဆုံးသွားတာ မဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်ချင်းဖြစ်ရင် ဒါ ပါရာဒိုင်းပြောင်းသွားတာ ဖြစ်မယ်။